तनावलाई यसरी कम गर्न सकिन्छ :
काठमाडौँ । चिन्ता र तनावबाट सायदै संसारका कोही मान्छे अछुतो रहेका होलान् । हरेक व्यक्तिलाई कुनै न कुनै प्रकारको चिन्ता हुन्छ । तनाव अहिलेको भागदौडको दैनिकिमा प्राय सबैलाई हुने गर्दछ । तनावकै कारण कतिपयले आत्महत्या समेत गर्ने गरेका छन् ।
भनिन्छ नि चित्ताले नै चितामा पुर्याउछ । यदि हामिले समयमै यसको रोकथाम गरेनौ भने तनावले भयावह स्थिति समेत ल्याउन बेर लाग्दैन । तनाव व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मानिसमा टाउको दुख्ने ,पेट दुख्ने , निन्द्रा नलाग्ने , आलस्य हुने, डिपे्रशनमा जानुका साथै विभिन्न रोगहरुको संक्रमण समेत बढ्ने गर्दछ । साथै तनाबकै कारण कतिपयको त सम्बन्ध समेत विग्रिने गरेको छ ।
तनावलाई कम गर्ने केहि टिप्सहरु :
१. संगीत सुन्नुहोस् वा घुम्न जानुहोस्
२. नियमित व्यायाम गर्नुहोस्
३. आफ्ना समस्याबारे कुरा गर्नुहोस्
४. जीवनमा तनावको कारण खोज्ने
५. ती मानिसबाट टाढा हुनुहोस् जसले तनाव बढाउँछन्
६. मेडिटेशन, व्यायामसहितका रिल्याक्ससेसन टेक्निक्सहरु जान्ने,
७. सन्तुलित खाना खाने,
८.पर्याप्त आराम गर्ने र सुत्ने समय व्यवस्थापन गर्ने,
९.तनाव कम गर्नका लागि रक्सी, ड्रग्स वा बाध्यकारी बन्दै गएका बानीहरु छोड्ने,
१०.आवश्यक परेको अवस्थामा समाजिक सहयोगको खोजी गर्ने,
११.आफूलाई मन पर्ने साथीभाइ तथा प्रियजनसँग समय बिताउने,
आवश्यक परेमा मनोविमर्शकर्ता, मानसिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता वा तनाव व्यवस्थापन गर्न सिकाउनेहरुसँग सम्पर्क गर्ने गर्नु पर्छ ।